phyo, Author at Top MM News
1. The car should be well-lighted and comfortable in the shade and avoid the sun’s heat. The heat may be too high, so the car can be left
Hello everyone, where is Apple producing its iPhone today? Which companies provide the components of an iPhone? The iPhone 4S is designed for Apple iPhone users in California,
1. Free space Of course, if you have 16GB of free storage at 500MB, your phone will be heavy. App cache on the phone also takes up a
MOUSE PAD NO CLICK RIGHT CLICK anymore.
Due to the difficulties with my laptop computer, I had to use the original mousepad when I couldn’t use the external mouse. Last year I playedaseries
One of the important things to do when you are flying is to put your phone in flight mode.If not, what will happen? Now I’ll tell you what’s
စင်ကာပူတွင် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် နောက်ထပ်ကူးစက်သူများ၏ ထက်ဝက်သည် ရောဂါလက္ခဏာမပြသူများဖြစ်နေ
phyo | June 9, 2020
စင်ကာပူတွင် COVID -19 ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရ ကြောင်း နောက်ထပ်စစ်ဆေး တွေ့ရှိသူများတွင် ထက်ဝက် သည် ရောဂါလက္ခဏာမပြသူများ ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရ၏ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် တုံ့ပြန်ရေးအဖွဲ့ အကြီး အကဲက တနင်္လာနေ့က ပြော ကြားသည်။ သေးငယ်သော စင်ကာပူ နိုင်ငံသည် ၎င်းတို့၏ ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်သော အလုပ်သမားများ
“ပုဂံကဘုရားတွေကို ဖောက်ထွင်းဖျက်ဆီးနေသူတွေ မသိသေးတဲ့ ပုဂံခေတ်က ကျိန်စာများ”
ပုဂံ က ဘုရားတွေ ဒီတလော အဖေါက်ခံရတယ်။ ဖေါက်တဲ့လူ နားမလည်တာလားတော့ မသိဘူး၊ ပုဂံခေတ် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေတော့ မရသွားပါဘူး၊ ဘုရားတွေက ၂၀၀၅ ခုနှစ် ပါတ်ဝန်းကျင်က အထွဋ်တင် ပြုပြင်ထားတဲ့ စေတီပုထိုး အသစ်တွေ ဖြစ်နေတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဌာပနာထည့်လှုထားတဲ့ ပြုပြင်မွမ်းမံအလှုရှင်တွေ စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်ရပါတယ်။ ခရီးသွားတွေမရှိ ခြောက်ကပ်နေတဲ့အချိန်၊ ညမထွက်ရအမိန့်ကို
“မိုးမရွာ လေမတိုက်ပါပဲ နေပူပူကွင်းပြင်မှာ နှမ်းသိမ်းနေတဲ့ မိသားစု(၅)ဦး မိုးကြိုးပစ်ခံရ”
မြင်းခြံမြို့နယ် မြောက်ကျွန်းကျေးရွာတွင် ရွာ အပြင်ဘက် တလင်းပြင်၌ နေလှန်းထားသည့် နှမ်းများ ရုတ်သိမ်းနေသည့် မိသားစုဝင်ငါးဦး မိုးကြိုးပစ်ခံရသဖြင့် သုံးဦးသေဆုံးပြီး တစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု ဇွန်(၆)ရက် ညနေပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ ရွာအပြင်ဘက်ရှိ နှမ်းတလင်းတွင် မိသားစုဝင် ငါးဦး နှမ်းသိမ်းနေစဉ် မိုးမရွာ၊ လေမတိုက်ဘဲ လျှပ်စစ်ကြောင်းကျကာ မိုးကြိုးပစ်ခံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း
တရုတ်နိုင်ငံက တင်ပို့တဲ့ စမ်းသပ်ရေး ကိရိယာတွေက အမှိုက်ရှုပ်တာပဲ အဖတ်တင်ပြီး သုံးစားမရဘူးလို့ ဘရာဇီးဆရာဝန် ပြော
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူအများဆုံး နိုင်ငံတွေစာရင်းမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံပြီးရင် ဘရာဇီးက အဆင့်(၂)ပါ။ ကူးစက်ခံရသူ ၇၁၀၀၀ ကျော်၊ သေဆုံးသူ ၃၇၀၀၀ ကျော် ရှိပါတယ်။ ဒါတောင် ရောဂါစစ်ဆေးမှု လုပ်နိုင်တာ နည်းသေးလို့ ဒီလောက်ပဲ တွေ့သေးတာ၊ အမှန်တကယ် ကူးစက်ခံရသူပမာဏက ဒီထက်များတယ်လို့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက သုံးသပ်ကြပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါ ကြုံရချိန်မှာ ဘရာဇီးနိုင်ငံရင်ဆိုင်ရတဲ့